Laga soo bilaabo Jannaayo illaa Juun 2020, oo ka mid ah wax soo saarka ugu muhiimsan ee warshadaha soosaarka bateriga ee Shiinaha, soosaarka baytariyada lithium-ion waxay ahaayeen 7.15 bilyan, iyadoo kororka sanad-sannadeedka uu yahay 1.3%; soosaarka baaskiiladaha korontada waxay ahayd 11.701 milyan, iyadoo koror sanad-sannadeed ah 10.3%. Sida laga soo xigtay waxaan ...
Kordhinta sicirka Cobalt-ka ayaa ka batay wixii laga filaayay ama wuxuu ku laaban doonaa heer caqli gal ah
Qeybtii labaad ee sanadka 2020, wadarta guud ee soo dejinta alaabada ceeriin ee cobalt-ka waxay aheyd 16800 tan, iyadoo sanad-ka-sanadka uu hoos u dhacay 19%. Kuwaas waxaa ka mid ah, wadarta guud ee soo dejinta macdanta 'Cobalt ore' waxay ahayd 0100 tan oo bir tan ah, oo sannad-sannadeedku hoos u dhacay 92%; wadarta soo dejinta wax soo saarka dhexe ee coba ...
Batariyada Lithium waxay la kulantay bedelida baytarika nikkel cadmium ka dibna baytari hydrogen nikkel. Marka laga eego aragtida miisaanka suuqa, miisaanka suuqa adduunka ee batteriga lithium ee qalabka korontada wuxuu gaari doonaa 9.310 bilyan yuan sanadka 2019, iyo miisaanka suuqa ee batari lithium ee awoodda ...
Ogosto 22, 2018, iyadoo loo marayo abaabulka xarunta maamulka shaqaalaha, qaar ka mid ah shaqaalaha TRUE POWER ayaa hal saac u kaxeeyay saldhiga horumarinta hoteelka Jinsha bay, waxayna bilaabeen tababarka horumarinta hal maalin ah. Qof kastaa wuu qoslay oo qoslay jawiguna wuu sareeyay. Ujeedada ex ...
Bishii Oktoobar 12, 2019, Bandhigga elektaroonigga ah ee Hong Kong oo ay martigelisay kheyraadka adduunka ayaa lagu qabtay Aasiya International Expo ee Hong Kong. AWOODDA RUNTA waxaa lagu casuumay inay kaqeyb galaan bandhiga, waababkiisa. 5c-b33, waxaan soo bandhignay baytariyada lithium-ion, baytariyada polymer, baytariyada nikkel nickel ...
Falanqaynta batteriga lithium iyo warshadaha gawaarida tamarta cusub
Marka la eego horumarka soo kordhaya ee gawaarida tamarta cusub, 2.2 milyan oo gawaarida korontada ku shaqeeya ah ayaa loo iibiyay adduunka oo dhan sanadka 2019, koror ah 14.5% sanadkiiba, taasoo u dhiganta 2.5% wadarta iibka gawaarida. Dhanka kale, marka laga hadlayo iibinta baabuurta tamarta cusub, BYD ayaa ku jirta kaalinta labaad Tesla. 19 sano gudahood ...
3.7 Batariga dib loo buuxin karo, Li Battery, Batariga Lithium Ion Polymer, 18650 Nimh, 12 Volt Xidhmada Laydhka Lithium Dib u Soo Celin Kara, 12v Lithium Ion Batariga dib loo soo celin karo, Dhammaan Alaabooyinka